NY FOMBA HANANANA FIADANANA | Ma vie en abondance
Posté le 1 novembre 2017 par abondance dans spiritualité
NY FIADANANA DIA AVY AMIN’NY FAHAIZA-MIFALY AMIN’IZAY EFA ANANANA.
Ny hoe mahay mifaly amin’izay efa ananana dia tsy fihetseham-po mihitsy fa fanapahan-kevitra. Tsy midika ihany koa hoe tsy te hiova na tsy te hivoatra. Fa mijery ny lafy tsaran’izay efa azo sy hatrehina.
I Timoty 6 : 8. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin’izany.
Tsy misy fiainana azo tondroina hoe tonga lafatra izany. Satria io fiainanao lazainao fa tsy mahafa-po io misy mitsiriritra. Io fiainan’olona tsiriritinao io mbola mitsiriritra ny an’ny hafa. Ary izany no mahatonga ny olona tsy mahita fiadanana; tsy mahay mianina sy tsy mahay mifaly amin’izay efa ananany.
Ny hoe mahay mifaly amin’izay efa ananana dia tsy fihetseham-po mihitsy fa fanapahan-kevitra. Tsy midika ihany koa hoe tsy te hiova na tsy te hivoatra. Fa mijery ny lafy tsaran’izay efa azo sy hatrehina. Izany hoe mahay mankasitraka an’Andriamanitra amin’izay efa nomeny sady faly amin’izany.
Raha misy olona hitanao fa nahomby teo amin’ny fiainana dia aza mialona azy fa akaikezo izy fa mety irika itondran’Andriamanitra anao ho amin’ny fahombiazana ny fisiany.
Koa manomboka anio dia manapaha hevitra ny hifaly sy hankasitraka an’Andriamanitra amin’izay efa ananana fa ho feno fiadanana ny fiainanao manontolo.